ငါသာလျှင် ငါ့ဘလော့ဂ်ရဲ့ အရှင်သခင်: 2010/11
a very, very nice MTV
အရိုးရဲ့ လူလည် အာရှသား စီးရီးထဲက နေသာ လေလာတဲ့နေ့ သီချင်း။
အဲဒီ စီးရီးထဲက တခြား သီချင်းတွေလိုပဲ အရမ်း ကောင်းတယ်။
ကိုလူထွေး ဆိုတဲ့ ဘလော်ဂါက အဲဒီသီချင်းကို ရုပ်မြင်သံကြား သရုပ်ဖော်ထားတာ ကြည့်ပြီးသွားကြပြီလား။
http://koluuhtwe.blogspot.com/2010/02/blog-post_14.html မှာ တွေ့တာနဲ့ ကော်ပီ ကူးလိုက်တယ်။
သူ့ရဲ့ ယူကျုမှာတော့ http://www.youtube.com/user/Koluuhtwe
တခြား သီချင်းတွေပါ သရုပ်ဖော်ထားတာ တွေ့ရမယ်။
လောလောဆယ် ဒီသီချင်းကို ခံစားကြည့်ပါအုံး။
တရုတ်မလေးကို ကြိုက်တဲ့ အကြောင်း ရေးထားတာမို့ စာသားတွေမှာ တရုတ်ရနံ့တွေ အပြည့် ထည့်ထားတယ်၊ နောက်ခံတီးလုံးမှာတောင် တရုတ်ဂီတသံ ပါလိုက်သေး။
One.. two.. three.. ကိုယ်ချစ်သွားပြီ
One.. two.. three.. ရည်ရွယ်လိုက်သည်
ဟိုတုန်းကမေးတဲ့ လမ်းဘေးလက္ခဏာ အဟောထဲမှာ
ပြည်ကြီးကရည်းစား အကျိုးပေးကောင်းမယ် ပြောခဲ့တာ
စိတ်ကူးနဲ့ မြူးခဲ့ ရူးခဲ့ရတဲ့ နှစ်လကြာ
သူလေးနဲ့ကျမှ တည့်တည့်ကြီးကို တိုးခဲ့တာ…
ငါချိုင်းနိစ် xx အလိုက်သိတဲ့ ကိုယ့် အသည်းလေးဟာ
နှာခေါင်းရင်းလေးတော့ နည်းနည်းပြားမယ်.. ခွင့်လွှတ်ပါ
သူ့ ပါးမို့မို့ ထက် သွေးကြောလေးတွေ စိမ်းလဲ့ဖြာ
အသားလေးကတော့ ဖွေးဖွေးဥကာ နုနုရွ
သူလေးကခိုင်းသမျှ လိုက်လုပ်ရတဲ့ နွားနှစ်ပါ
သူလေးကြောင့် ရိုက်ကြ ကိုက်ကြရတာ ခွေးနှစ်မှာ
ဆိတ်နှစ် မြင်းနှစ် မျောက်နှစ်ပေါင်းစုံ ကူးတိုင်းမှာ
မိုးနတ်မင်းကြီး အမြဲတမ်းမအောင် ဆုတောင်းတာ
စွန်ဆူးကျမ်းထဲက သိမ်းပိုက်နည်းတွေ ကြိုးစားရှာ
ကွန်ဖြူးရှပ် ကြီးရဲ့ စကားလုံးနဲ့ ကိုယ့် ရည်းစားစာ
ဘုံကျောင်းကြီးထဲလည်း ပြေးပြေးပြီး စာ ချကြည့်ရ
ရေနွေးကျမ်းလေးတခွက် ကောင်းကောင်းတိုက်ရင် မမောဘူးဗျ
One.. two.. three ကိုယ်ချစ်သွားပြီ
ရေလည်အောင် ကိုယ် ရှင်းရှင်းပြောမည်
One.. two.. three ရည်ရွယ်လိုက်သည်
ရွှေယောက်ဖနှစ်ယောက်က အတွင်းအားသုံးကာ ဓားစွမ်းပြ
everybody လက်ခုတ်တီးပါ ကျနော့ဘက်က
သူ အန်းကုန်းကြီးက ပြုံးစိစိနဲ့ ခေါင်းညိမ့်ပြ
ကျနော်မျိုးကြီးကတော့ ငြိ်မ်းချမ်းရေးကို ရှေးရှုတာ…
အားလုံး အားလုံး ချိုင်းနားတောင်းကို လိုက်ခဲ့ပါ
အားရပါးရ သောက်ကြစမ်းပါ ပြီးတော့မှ…
အမ်ပေါင်းအိတ်လေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ထည့် ပေးတဲ့အခါ
မစ်ချိုင်းနီးစ်လေးရဲ့ အိမ်မက်ထဲကို ဟီးရိုးဗျ
One.. two.. three.. အဆင်ပြေသွားပြီ
နေသာ လေလာတဲ့ တနေ့မှာ လက်ထပ်မည်
အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းသင်းပါ့မည် ရှေ့လျှောက်ခရီး…
ကာတွန်းဆရာ Stephff ရဲ့လက်ရာများ
အထူး အကျဉ်းထောင် အမှတ် ၅၄ က ကမ္ဘာကျော်အကျဉ်းသားကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကို Stephff က ပုံဖော်ထားတာပါ။ လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ ကြီးထွားလာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပုံကို သိုင်းသမားတွေ ယိ(စ်)! ဆိုပြီး ကီသွင်းလိုက်သလို ပုံဖော်ထားတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ရဲ့ ဦးထုပ် တံဆိပ်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အရိုးခေါင်း လိုဂို ပေါ့။
ဒီကာတွန်းကတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ သတင်းသမားတွေအကြောင်းပါ။
ကာတွန်းဆရာ Stephff (အမည်ရင်း Stephane Peray)က ဘန်ကောက်ဇာတိ၊ ၁၉၆၄ ဖွား၊ ပြင်သစ်လူမျိုး။
သူ့လက်ရာတွေက နိုင်ငံတကာ စာနယ်ဇင်းတွေမှာ တဖြည်းဖြည်း နေရာ ယူလာပါပြီ။ နိုင်ငံတကာမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို အရုပ်ဆွဲပြီး ပြောင်တဲ့သူပါ။
ဒါကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက နာမည်ကျော် ရှပ်နီ ဆန္ဒပြသမားတွေကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။
သွေးသံရဲရဲ လဲပြိုနေတဲ့ မြန်မာတွေက "ဘန်ကီမွန်း မင်းကို ဂရုစိုက်မယ်လို့မင်း ထင်ရင်တော့ သိပ်ကို မှားသွားမယ် သူငယ်ချင်း" လို့ လှမ်းပြောနေပုံပါ။
သွေးအိုင်ထဲမှာတော့ ဘုန်းကြီး၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ တို့ကို ပုံဖော်ထားပြီး စစ်ဝတ်စုံနဲ့ငနဲကိုတော့ ကာတွန်းဆရာက သီချင်း ပေးဆိုထားတာတွေက တကယ့် အဖြစ်မှန်တွေကို ထင်ဟပ်နေပါတယ်။
စက္ကူလိပ်မှာ human rights လို့ရေးထားတာကတော့ ကာတွန်းဆရာStephff ရဲ့အသေးစိပ် သရော်ချက်ပါပဲ။
ဒါကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်လပ်မှု။
ဒီကာတွန်းတွေထဲက တချို့ ကို ဧရာဝတီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်း စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြပြီးပါပြီ။
ပေါတာကြီးကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ သီချင်း
ဒီနေ့ ရွေးကောက်ပွဲနေ့။ ဘာကို ရွေးကောက်ရရင် ကောင်းမလဲ။
အင်တာနက်မှာ ရှာတော့ ရွေးကောက်စရာတွေက သိပ်များတာပဲ။
စိတ်ထဲကနေ နံရိုး နံကြားထောက်ပြီး ခွေးနဲ့ကြောင်ပုံကို ရွေးကောက်လိုက်တယ်။
ခွေးကြီးတကောင်နား သွားရပ်မိတဲ့ ကြောင် တကောင် ဘာဖြစ်သွားသလဲ။ အင်း ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး) ခွေးက သဘောကောင်းလို့လား ခွေးစိတ်ပျောက်နေလို့လား မသိဘူး MSN ၀က်ဆိုက်က ရပါတယ်။ ကြောင်က ခွေးအရိပ် ခိုသဗျ။ ပြီးတော့ ဘာလုပ်သလဲ။ အရိပ်ကောင်းတော့ အနားယူပြီပေါ့။း)
ကျနော့်ခွေးတွေနဲ့များ ကွာပါ့။ ကျနော့်ခွေးတွေအကြောင်း cats and dogs part2ဆိုပြီး တရက်ရက်တော့ ရေးရအုံးမယ်။
မူရင်းပုံမှာတော့ ဟောဒီလို စာညွှန်း ပါတယ်။
အမေကြီးကား Ohio ပြည်နယ်က ခွေးနဲ့ကြောင် တဲ့။
ကဲ - ခင်ဗျားကရော ခင်ဗျားဘလော့အတွက် ဘာတွေ ရွေးကောက်မလဲ?
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ ကြို့ပင်ကောက် မဲဆွယ် ဟောပြောပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (Nov3- AP photo)
ကော်ဇော၊ အိပ်ယာခင်း တို့ကို စားပွဲမှာ ခင်းထားတယ်။ အသစ်တွေဖြစ်မှာပါ။ အမြင်ဆန်းတာပေါ့။ နောက်ခံအတွက် အနည်းဆုံး စောင် ၂ ထည်၊ လိုက်ကာ ၁ ခုကို သုံးထားတယ်။
ဒါလည်း အမြင် ဆန်းတာပါပဲ။
ဆံပင်ဖြူ အမျိုးသမီး ၂ ဦးလည်း ပရိသတ်ထဲ ရောက်နေတယ်။
အားနည်းချက် တခုလို့ပြောရမလား - ပရိသတ်ထဲ လူကြီးတွေ ရောက်နေပေမယ့် လူငယ်တွေ ခုံအမြင့်နဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ ကြမ်းတပြေးတည်း ထိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားရင် ပိုကောင်းမယ်။ နယ်ခံတွေ စီစဉ်တာ ဖြစ်ဖို့ များတယ်။
နယ်က သာရေးနာရေးတွေမှာ အဲဒီလိုပဲ၊ စောင်တွေ အိပ်ယာခင်းတွေနဲ့ မဏ္ဍပ်ကို အလှဆင်ကြတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ငှားတာ ရှိသလို ရပ်ရွာ လူမှုရေး အဖွဲ့တွေဆီကလည်း ငှားကြတယ်။
ဒီပုံကို မြင်ရတာ ကျေးလက်ကို သတိရစရာပဲ။
စိတ်ဖိစီးမှု နဲ့သီချင်းရေးဆရာ ကေအေတီ (from Peopl...
my post in irrawaddy blog and funny comments, ha h...